पानी बेचेर दिनको ३ सय कट्दैन, हात पसारेर खान स्वाभिमानले दिँदैन: हेर्नुहोस भिडियो सहित – Kavrepati
Home / Uncategorized / पानी बेचेर दिनको ३ सय कट्दैन, हात पसारेर खान स्वाभिमानले दिँदैन: हेर्नुहोस भिडियो सहित
पानी बेचेर दिनको ३ सय कट्दैन, हात पसारेर खान स्वाभिमानले दिँदैन: हेर्नुहोस भिडियो सहित
admin 1 week ago	Uncategorized Leaveacomment 87 Views
दशैमा स्वादिलो खशिको माशु बनाउने तरिका (भिडियो सहित)
बिहेको लागी केटा खोज्दै मनोज गजुरेलकि पुर्वपत्नी मिना ढकाल : भन्छिन जुन जातको केटा भएनी हुन्छ
मध्यमवर्गीय थुप्रै ज्येष्ठ नागरिकको कथा हो यो । आफ्नो श्रममा बाँच्न चाहने यस्ता पात्र दया होइन, प्रोत्साहन खोजेका छन् । प्रेमको भरोसा चाहेका छन् ।इमेज खबर भिडियो
Previous फेसबुकमा लभ परेर बिहे गर्न ठिक्क परेकी केटी देखेर केटा भए बेहोस, गरे देह त्यागको प्रयास! यस्तो छ अचम्मको कारण
Next आफ्नै छात्रालाई यी प्रिन्सिपलले अ’स्लिल म्यासेज र तस्बिर पठाएपछी……
खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति?
काठमाडौँ, असोज २१ । मासु व्यवसायीहरुले दशैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका …